Ny fitsapana aquarium azo antoka 100% izay atolotray | Ny trondro
Ny fitsapana Aquarium dia tsy soso-kevitra fotsiny, fa azo raisina ho tsy maintsy atao mba hitazonana ny kalitaon'ny rano ary miantoka ny fahasalaman'ny trondronay. Tsotra sy haingana be ny fampiasana azy ireo dia fitaovana iray izay manampy ny vao manomboka na ny matihanina amin'ny fitarihana rano.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny sasany amin'ireo fanontaniana ilaina indrindra momba ny fitsapana aquarium., ohatra, inona no ilana azy ireo, ahoana ny fampiasana azy ireo, ny refy fandrefesana azy ireo ... Ary, indraindray, mamporisika anao izahay mba hijery an'ity lahatsoratra hafa momba ity CO2 ho an'ny aquarium, iray amin'ireo singa misy ao anaty rano izay tsy maintsy fehezina.
Miliard Test Strips ...
Kit BOSIKE 6 in 1 Strips...
1 Inona no atao hoe fitsapana aquarium?
2 Ahoana ny fomba hanaovana fitsapana aquarium
3 Karazana fitsapana aquarium
4 Inona avy ireo masontsivana voafehy amin'ny fitsapana aquarium?
4.1 Chlore (CL2)
4.2 Asidra (PH)
4.3 Hardness (GH)
4.4 Mitambatra nitrite misy poizina (NO2)
4.5 Ny antony ahidrano (NO3)
4.6 PH fahamarinan-toerana (KH)
4.7 Dioksida karbonika (CO2)
5 Impiry ianao no mila mizaha toetra ny ranomasina?
6 Marika fitsapana Aquarium tsara indrindra
7 Aiza no hividianana fitsapana aquarium mora vidy
Inona no atao hoe fitsapana aquarium?
Azo antoka fa efa tsapanao, raha manana aquarium ianao, izany Ny kalitaon'ny rano dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny fahasalaman'ny trondro. Ireo biby ireo dia mora tohina, ka ny fiovana eo amin'ny tontolo iainany (ary, mazava ho azy, ny rano akaiky azy indrindra) dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana ary mbola ratsy kokoa aza amin'ny tranga sasany.
Ny fitsapana Aquarium dia ampiasaina indrindra amin'izany, mba hahafantaranao amin'ny fotoana rehetra raha tsara ny kalitaon'ny rano. Mba hahalalanao izany dia mila mitazona ny haavon'ny nitrite sy ny amoniaka ianao, ankoatry ny hafa. Araka ny ho hitantsika, ny fitsapana aquarium dia tsy vitan'ny hoe tamin'ny fotoana voalohany nametrahantsika rano tao aminy fa ampahany ihany koa amin'ny fikojakojana azy ireo.
Ahoana ny fomba hanaovana fitsapana aquarium
anefa any amin'ny magazay biby fiompy sasany dia manolotra ny fahafaha-manao fanandramana ny rano ao amin'ny aquarium anao izy ireo, eto izahay dia hifantoka amin'ny kitapo ahafahanao manao fitsapana manokana any an-trano izay, noho ny antony mazava, no mety hiteraka fisalasalana indrindra aminao, indrindra raha vaovao amin'ny aquarism ianao.
Ny fandidiana ny fitsapana dia tsotra ihany, satria ny ankamaroany dia ny fakana santionan'ny rano. Ity santionany ity dia miloko (na mitete na milentika tsipika, na amin'ny fanomezana anao fotsiny ny isa) ary tsy maintsy ampitahanao amin'ny latabatra izy ireo, tafiditra ao anatin'io vokatra io ihany, izay hahafahanao manamarina raha toa ny soatoavina marina.
Karazana fitsapana aquarium
Misy izany fomba telo lehibe hanaovana fitsapana aquarium, arakaraka ny karazana kit: amin'ny tsipika, miaraka amin'ny rano mitete na miaraka amin'ny fitaovana nomerika. Ny rehetra dia azo itokisana, ary ny fampiasana ny iray na ny iray hafa dia miankina amin'ny tsironao, ny tranokala anananao na ny teti-bolanao.
Ny fitsapana izay misy kitapo strip dia mora ampiasaina. Raha ny mahazatra dia misy tady maromaro ao anaty tavoahangy tsirairay ary tsotra be ny asany, satria izy fotsiny dia miroboka ao anaty rano, mampihorohoro azy ary mampitaha ny valiny amin'ireo sanda voafaritra ao anaty tavoahangy. Ho fanampin'izany, maro amin'ireo marika mivarotra an'ity karazana fitsapana ity no ahitana fampiharana iray ahafahanao mitahiry ny valiny ary mampitaha azy ireo hahita ny fivoaran'ny rano ao anaty fitarihanao.
Ity ny Test 5 amin'ny...
Ny fanandramana ranon-javatra dia fomba iray hafa tsara handinihana ny kalitaon'ny rano ao amin'ny aquarium anao. Avy hatrany amin'ny ramanavy dia misy fiantraikany bebe kokoa noho ny ravina, satria misy fantsom-bao sy kapoaka feno poakaty feno ireo akora ireo. amin'izay ianao hizaha toetra ny rano (zavatra tsy tokony ho adino raha tsy tianao ny habaka be dia be). Na izany aza, tsotra ny fandidiana: mila mametraka santionany amin'ny rano anaty rano ao anaty fantsona ianao ary manampy ny ranoka hanamarinana ny faran'ny rano.
Raha misafidy ity fitsapana ity ianao, ankoatry ny fahamendrehana, alao antoka fa misy ny sticker mba hamantarana ny fantsona tsirairay Ary noho izany dia tsy misavoritaka tsy nahy ianao rehefa mandray ny fitsapana.
Farany, Ny fitsapana karazana nomerika dia, tsy isalasalana, fa ny marina indrindra eny an-tsena, na dia matetika aza no lafo indrindra (na dia mazava ho azy aza, maharitra ela kokoa izy ireo). Tsotra ihany koa ny fandidiana azy, satria tsy maintsy ataonao ao anaty rano fotsiny ilay pensilihazo. Na izany aza, manana olana izy ireo: misy maodely marobe izay misy fitsapana PH fotsiny na farafaharatsiny faran'izay tsotra kokoa, izay, na dia marim-pototra aza, dia mamela ireo singa hafa mety hahaliana antsika ny refy.
Inona avy ireo masontsivana voafehy amin'ny fitsapana aquarium?
Ny ankamaroan'ny fitsapana aquarium Izy ireo dia mampiditra andiam-pandrefesana handrefesana ary izany no mamaritra raha toa ka kalitao ny rano ananao ao anaty aquarium anao. Noho izany, rehefa mividy an'ity karazana fitsapana ity dia alao antoka fa refesin'izy ireo ireto zavatra manaraka ireto:
Ny klôria dia singa iray izay mety misy poizina lehibe ho an'ny trondro ary miteraka fahafatesana aza raha tsy ao anatin'ny masontsivana farafahakeliny. Ho fanampin'izany, ny membrane osmosis anao dia mety ho tototra ary ny zavatra ratsy indrindra dia izany dia hita amin'ny toerana akaiky toy ny rano fisotro. Tehirizo ao amin'ny aquarium anao ny haavon'ny chlorine amin'ny 0,001 ka hatramin'ny 0,003 ppm mba tsy hijaly ny kalitaon'ny rano.
Efa nilaza izahay teo aloha fa ny trondro dia tsy manohana ny fiovan'ny rano, ary ny PH dia ohatra tsara amin'izany. Ity paramètre ity dia refesina ny asidrain'ny rano, izay, raha miova kely izy, dia mety hiteraka fihenjanana lehibe amin'ny trondroo. ary mahatonga azy ireo ho faty mihitsy aza, zavatra mahantra. Zava-dehibe ny fananana ambaratonga PH mazava na dia tonga avy any amin'ny magazain'ny biby fiompy aza ianao: tsy maintsy ampiasanao ny hazandranoo amin'ny fandrefesana ny PH amin'ny magazay ary ampifanaraho tsikelikely amin'ny fitoeran'ny trondro.
Ankoatra izany, ny asidra ao anaty rano dia tsy fefy voafaritra fa miova rehefa mandeha ny fotoanaRehefa manome sakafo ny trondro dia poop izy ireo, lasa oksizenina ny zavamaniry ... noho izany, tsy maintsy refesinao ny PH an'ny rano ao anaty aquarium anao farafahakeliny isam-bolana.
El Ny haavon'ny PH izay atolotra ao anaty aquarium dia eo anelanelan'ny 6,5 sy 8.
Ny hamafin'ny rano, fantatra koa amin'ny anarana hoe GH (avy amin'ny fahasarotana amin'ny ankapobeny amin'ny teny anglisy) dia iray amin'ireo masontsivana izay tokony hanampian'ny fitsapana aquarium tsara anao hanatsara. Ny hamafàna dia manondro ny habetsahan'ny mineraly ao anaty rano (indrindra ny calcium sy manezioma). Ny zavatra manahirana momba an'io masontsivana io dia miankina amin'ny karazana aquarium sy ny trondro anananao, dia refesina iray na iray hafa no hatolotra. Ny mineraly misy ao anaty rano dia manampy ny fitomboan'ny zava-maniry sy ny biby, izany no mahatonga ny masontsivana tsy tokony ho ambany na avo loatra. Ny soso-kevitra, ao amin'ny aquarium rano velona, ​​dia haavon'ny 70 ka hatramin'ny 140 ppm.
Mitambatra nitrite misy poizina (NO2)
Ny Nitrite dia singa iray hafa izay tokony hitandremantsika ihany, satria afaka miakatra ny haavony noho ny antony maro samihafaOhatra, amin'ny sivana biolojika iray izay tsy mandeha tsara, amin'ny alàlan'ny fananana trondro be loatra ao anaty aquarium na amin'ny famahanana azy ireo be loatra. Ny Nitrite koa dia sarotra ahena, satria amin'ny alàlan'ny fanovana rano ihany no ahazoana azy. Fahita tokoa ny mahita ambaratonga nitrite avo any anaty akarium vaovao, fa aorian'ny bisikileta dia tokony hidina izy ireo. Raha ny marina dia tokony ho 0 ppm hatrany ny haavon'ny nitrite, satria na dia 0,75 ppm aza dia mety hampahory ny trondro.
Ny antony ahidrano (NO3)
NO3 koa dia fantatra amin'ny anarana hoe nitrate, anarana iray mitovy amin'ny nitrite, ary raha ny marina dia singa roa misy fifandraisana akaiky izy ireo., satria ny nitrate dia vokatry ny nitrite. Soa ihany fa tsy misy poizina io raha oharina amin'ny nitrite, na dia tsy maintsy manamarina ny haavony ao anaty rano aza ianao mba tsy hahavery ny kalitaony, satria toa ny PH, toa hita koa ny NO3, ohatra, noho ny fiharatsian'ny ahidrano. Ny haavon'ny nitrate tsara ao amin'ny aquarium rano velona dia ambany noho ny 20 mg / L.
PH fahamarinan-toerana (KH)
Ny KH dia mandrefy ny habetsaky ny gazy karbonika sy ny bikarbonate ao anaty ranoRaha lazaina amin'ny teny hafa dia manampy amin'ny fanamainana ny asidra izy io satria tsy miova haingana ny PH. Mifanohitra amin'ny masontsivana hafa, ny avo kokoa ny KH ny rano, ny tsara kokoa, satria midika izany fa kely kokoa ny vintana ny PH hiova tampoka. Noho izany, ao amin'ny akondro rano velona dia ny tahan'ny KH natolotra dia 70-140 ppm.
Dioksida karbonika (CO2)
Singa iray tena ilaina amin'ny fahaveloman'ny Aquarium (indrindra amin'ny tranga ireo nambolena) dia ny CO2, tena ilaina amin'ny zavamaniry mba hanatanterahana fotosintesis, na dia misy poizina amin'ny trondro amin'ny haavo avo loatra aza. Na dia miankina amin'ny lafin-javatra maro aza ny fatra voatondro ho an'ny CO2 (ohatra, raha manana zavamaniry ianao na tsia, ny isan'ny trondro ...) ny salan'isa voatondro dia 15 ka hatramin'ny 30 mg isaky ny litatra.
Impiry ianao no mila mizaha toetra ny ranomasina?
Araka ny hitanao nandritra ny lahatsoratra, tena ilaina tokoa ny manao fitsapana ho an'ny rano aquarium matetika, na dia miankina amin'ny zavatra niainanao tamin'io lohahevitra io aza. Ho an'ireo vao manomboka, ohatra, dia asaina mandinika ny rano isaky ny roa na telo andro, toy ny rehefa mandeha bisikileta aquarium vaovao, raha ho an'ny manam-pahaizana kosa dia azo hitarina indray mandeha isan-kerinandro ny fitsapana, isaky ny dimy ambin'ny folo andro na iray volana mihitsy aza.
Marika fitsapana Aquarium tsara indrindra
anefa be dia be ny fitsapana aquarium eny an-tsena, zava-dehibe ny fisafidianana iray izay tsara sy azo ianteherana, raha tsy izany dia tsy hitondra soa kely ho antsika izany. Amin'ity lafiny ity, marika roa no miavaka:
Tetra dia iray amin'ireo marika efa nisy teo amin'ny tontolon'ny aquarism. Niorina tamin'ny 1950 tany Alemana, niavaka izy tsy noho ny sombin-tsoratry ny fitsirihana rano anaty rano sy rano anaty rano, fa koa ho an'ny vokatra maro karazana ao anatin'izany paompy, haingon-trano, sakafo ...
Marika alemanina iray manana laza sy fahamendrehana lehibe, izay nanomboka tamin'ny 1960 tao amin'ny magazay kely manam-pahaizana. Ny fitsapana aquarium JBL dia be pitsiny ary, na dia manana modely misy kofehy aza izy ireo, dia ny fitsapana fitetezana no tena mampiavaka azy ireo., izay ahitana fonosana feno maro be, ary tavoahangy fanoloana mihitsy aza.
Aiza no hividianana fitsapana aquarium mora vidy
Ahoana no azonao an-tsaina misy ny fitsapana aquarium indrindra any amin'ireo magazay manokana, satria tsy vokatra ampy amin'ny ankapobeny izy ireo mba ho azo ampiasaina na aiza na aiza.
Noho izany, ny toerana mety hahitanao ireo fitsapana isan-karazany indrindra handrefesana ny kalitaon'ny rano ao anaty akarium misy anao Amazon, izay misy ny tadin'ny fitsapana, ny rano mitete ary ny digitaly omena sy amidy, na dia mety ho somary misavoritaka ihany aza io fangaro marika io ihany, indrindra raha vao manomboka amin'ity lohahevitra ity ianao.
Amin'ny lafiny iray, magazay manokana toa an'i Kiwoko na TiendaAnimal Mety tsy mahita karazana toa an'i Amazon ianao, fa azo antoka kosa ireo marika amidiny. Ao amin'ireo magazay ireo dia afaka mahita fonosana sy tavoahangy tokana ianao ary koa manana torohevitra manokana.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra momba ny fitsapana aquarium ity dia nanampy anao hiditra amin'ity tontolo mahaliana ity. Lazao aminay, ahoana no handrefesanao ny kalitaon'ny rano ao anaty aquarium anao? Tianao ve ny fitsapana amin'ny strips, amin'ny drops na digital? Misy marika manokana omenao azy ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » Fitsapana Aquarium